Kacha arụpụta HIP Ọkụ na -emepụta ihe na ụlọ nrụpụta | Toonney
Dabere na ahụmịhe afọ na ọkachamara na imepụta ihe carbide tungsten, ụlọ ọkụ ọkụ ọkụ Toonney na -emezi igwe dị ugbu a n'ahịa, nke na -enyere Toonney aka inweta ngwaahịa kacha mma. Na -atụ anya ire ngwaahịa carbide tungsten, Toonney na -eresịkwa ụfọdụ ndị ahịa ha chọrọ nnukwu ọkụ.
Ọkụ a na -agba ọkụ HIP bụ ọkụ na -eguzogide na -eguzogide kwụ ọtọ, yana sekit nchịkwa atọ dị iche iche iji hụ na ịdị n'otu nke oke okpomọkụ. Ọkụ a na-enwu enwu nwere ike mechaa usoro nsị nke nsị, sintering, ngbanwe agụụ, mgbali mgbali, ịjụ oyi ngwa ngwa n'otu oge ọrụ. Ma enwere ike itinye ya n'ọrụ maka ịkpụ ihe siri ike igwe na seramiiki dara. Kedu ihe ọzọ, ọkụ a na-enwu enwu nwere ike degrease ihe nke wax, roba, Ethocel n'okpuru nrụgide Argon/Nitrogen (0-0.1Mpa) na de-PEG (mgbakọ ọkụ gụnyere) n'okpuru nrụgide hydrogen (0-6Mpa).
Usoro SIEMENS PLC + IPC + 15inches na -achịkwa usoro ọrụ niile nke nwere ike ịghọta ọrụ nke njikwa akpaka, nleba anya, ịchụ na ndekọ, nyocha onwe onye, ​​nchọpụta nsogbu nke oke okpomọkụ, ọnụego na -abawanye ụba, oge ịkwọ mmiri na ikuku gas. usoro dum.
Isi akụkụ nke sintering ọkụ (Control mmiri, sensọ, graphite mmiri, thermal di na nwunye, valves wdg) na -esi na USA, Japan na German. Mba ndị a na -anọchite anya ọkwa teknụzụ kacha baa uru n'ụwa n'ọkụ na -agba agba. Ha nwere ike izute mmepụta chọrọ nke ogologo oge kwụsiri ike na a pụrụ ịdabere na ya.
Toonney nwere usoro ọkụ ọkụ ọkụ atọ nwere ike ịkewa ya site na nrụgide. Ha bụ ọkụ ọkụ 1Mpa na -agbaze ọkụ, 6Mpa na -agbaze ọkụ na -ekpo ọkụ HIP na 10Mpa na -agbaze ọkụ ọkụ HIP. Maka ihe a na -ahụkarị bụ ite ọkụ na -agbaze. Toonney nwere ụdị atọ kacha ewu ewu nke akpọrọ dị ka oke oghere dị mma si dị, ha bụ Model TESTSIP200*200*600, Model SIP300*300*900-6Mpa, Model SIP500*500*1800-6Mpa
Were obere TESTSIP200*200*600 dị ka ọmụmaatụ, nkọwa teknụzụ ọkọlọtọ ka edepụtara n'okpuru tebụl. N'ezie, a na -ahazi igwe a na -agbagwoju anya (ọkụ na -agba agba) ma na -emepụta dị ka nkọwa zuru ezu chọrọ si jiri ndị ahịa mee ihe pụrụ iche. Onye ahịa nwere ike chọọ n'ụzọ pụrụ iche ka ọ gbanwee data ọ bụla anyị nwere ndị otu ọrụ aka ọrụ ka ha gbanwee atụmatụ nke nnukwu ite ọkụ a iji ruo ihe achọrọ pụrụ iche.
Oghere dị irè maka itinye ihe Ogo 200/Obosara200/Ogologo 600
Ezubere oge ndụ ọrụ 6000 ugboro
Mbipụta mkpụrụedemede Graphite dị n'ime (ime dia, mpụga dia. Ogologo) Φ330 φ380 800L
Olu dị irè 24L
Ibu oke nke itinye ihe (dabere na nhazi ihe) 50kg
Ike nke transformer transformer 150KVA
Nọmba sekit ọkụ/transformer 3
Achọrọ oghere (Ogologo*Obosara*Elu) 3.5*4*3.5*M
Agba White na Blue/Yellow na nwa
Ngosipụta kabinet na -ejikwa ọkụ eletrik Bekee
Mkpokọta ibu 12T
2.Main isi teknuzu data
Pain kacha mma maka otu igwe mgbapụta nkịtị na ọnọdụ akọrọ oyi （N'ọnọdụ 120min agụụ mgbapụta nwere ike nweta oghere dị ala） 0.5Pa
(Nke kacha ala nwere ike ịbụ 0.1Pa)
Oke ọnụego mgbapụta ọkụ n'ime oke ọkụ kpọrọ nkụ dị ọcha 10Pa/H.
Oke okpomọkụ 1600 ℃
Ogologo oge ọrụ 1580 ℃
Ndidi okpomọkụ na oghere na ihe ejiri arụ ọrụ na ọnọdụ okpomọkụ n'okpuru 1000oC ± 5 ℃
Ndidi okpomọkụ mgbe ọ na -agbada n'okpuru nrụgide 6Mpa Algon na ọnọdụ okpomọkụ karịa 1000oC. ± 7 ℃
Nsogbu Maximun (ntọala valvụ nchekwa) 6.0Mpa
Ọnụ nchịkọta nchịkọta ≥97.5%
Oge jụrụ oyi na ntinye zuru oke ≤4 awa
Nsogbu Argon (Ịdị ọcha ≥99.99%) Min.8Mpa Max.15Mpa
Ike kwụsie ike na 50bar na 1400 ℃ 105KW
Oke voltaji AC400V 50 Hz
Njikwa voltaji etiti AC220V / DC24V
Ndabere voltaji ± 5%
Ike njikwa kabinet disconnector ike Max.300A
Toonney ga -ezipụ ndị ọrụ nka ka ha nyere aka gbakọta ma mechaa nnwale nnwale iji hụ na ọrụ nke ọ bụla na -arụ. Ma enwere oge akwụkwọ ikike otu afọ n'ime nke ọ bụrụ na nsogbu ọ bụla emee n'oké ọkụ na -ere ọkụ, Toonney ga -arụzi ya na akwụghị ụgwọ. Mgbe akwụkwọ ikike otu afọ gasịrị, mmezi ụgwọ ga -adịru oge niile ọkụ na -agba agba.
Ọkụ ọkụ na -enwu enwu nke Toonney nwere asambodo gọọmentị China yana asambodo AMSE maka ahụ ọkụ ọkụ iji hụ na ịdị mma na iji ọkụ ọkụ a na -agba agba na ahịa ụlọ na mba ụwa. Ma ọ bụrụ na enwere asambodo pụrụ iche maka ụdị ọkụ ọkụ na -ere ọkụ na mba gị, wToonney nwekwara ike ịnwa itinye akwụkwọ ma nweta ego ọzọ, yabụ ị nwere ike nweere onwe gị ịzụrụ ọkụ na -ere ọkụ, ọ dị mma na nchekwa!
Product aha: Ọkụ na -enwu enwu
Nọmba nlereanya: 10MP sinter-HIP ọkụ
Ụdị: Ọkụ na -ekpo ọkụ HIP
Ihe: Onye na -ahụ maka okpomoku, ngwaọrụ ịkpọtụrụ, ihe na -ekpo ọkụ yana ihe ndị ọzọ
Ngwa: Iron na ígwè ụlọ ọrụ, nkà mmụta banyere ígwè, ọhụrụ ihe onwunwe ụlọ ọrụ
1. Enwere ike iji ọkụ na -enwu enwu gbamgbam seramiiki, seramiki seramiki na ihe ndị ọzọ zirconia.
2. Enwere ike iji ọkụ na -enwu enwu iji mịpụta agụba diamond, mkpara carbide, ngwaọrụ ịkpụ carbide na ihe ndị ọzọ.
3. Enwere ike iji ọkụ na -enwu enwu dị ka ọgwụgwọ okpomọkụ nke ọla kọpa na eriri ígwè.
4. Enwere ike iji ọkụ na -enwu enwu ka ọ bụrụ sinter ma ọ bụ kpoo okirikiri ihe nkiri siri ike, ndị na -eguzogide ihe nkiri dị oke mkpa na ngwa elektrọnịkị electrode, LTCC, onye na -ekpo ọkụ nchara, ogwe anyanwụ na ngwaahịa ndị ọzọ yiri ya.
Na otu okwu, a na -eji ọkụ na -agba agba agba na ụlọ ọrụ igwe na nchara, ụlọ ọrụ igwe, ụlọ ọrụ ihe ọhụrụ na ihe ndị ọzọ.
1. Okpomọkụ iche ihe onwunwe bụ cylinder ekara ike chere na magburu onwe okpomọkụ iche arụmọrụ, cross-ngalaba bụ a multi-oyi akwa carbon chere mejupụtara Ọdịdị.
2. Njikwa okpomoku mpaghara atọ dị iche iche ahaziri iche nke ejiri mkpanaka kpaa ọkụ kpaa na nkesa na-adịghị ahụ anya na-ahụ maka ịdị n'otu nke okpomọkụ.
3. A na -esi na Japan ebubata ụdị okirikiri okirikiri okirikiri/igbe kpo oku mgbe niile, ihe owuwu ahụ nwere ezi uche ma sie ike, ihe nrụpụta ọkụ dị elu na imewe, nrụnye ma ọ bụ ebukọtala dị mfe ma dị mfe.
4. Ọdịdị pụrụ iche nke sistemụ na -emebi emebi yana akụrụngwa dị elu, hụ na ọnụego mkpokọta wax karịrị 97.5%.
5. A na -ebubata di na nwunye na -ekpo ọkụ molybdenum alloy tube na USA nke na -enye teknụzụ kachasị elu
6. Ngwa ngwa ngwa ngwa nke cylinder ụzọ na-eme ka obi jụrụ (awa 4-5 iji belata okpomọkụ ka ịmalite), melite arụmọrụ ọkụ.
7. 15 "Ihuenyo mmetụ aka + sistemụ njikwa SIEMENS PLC nwere ike hụ na nchekwa na ntụkwasị obi nke ọkụ na ndekọ data nwere ike iru afọ 1, usoro akụkọ ihe mere eme nwere ike idekọ data 32, interface ahụ nwere nghọta.
Kwadebere ya na usoro mgbazigharị maka mmiri jụrụ oyi n'ime na mpụga, n'ime mmiri a na -ekesa na mgbasa mechiri emechi nwere ike tinye onye nnọchi anya deoxidizing na antirust dị ka usoro nke THRONE iji gbatịkwuo ndụ ahụ ọkụ.
9. pipeline agụụ na -eji igwe anaghị agba nchara 304.
10. Sistemụ ngbanwe akpaka mmiri mberede, ọ bụrụ na sistemụ ọkụ/mmiri na -apụ apụ na -akpaghị aka gaa na isi mmiri ndabere; Ndị ọrụ nwere ike ịkwado nkeji ike ọkụ iji hụ na ọkọnọ mmiri na -ekesa.
11. Nhazi nke okporo ụzọ ụgbọ ala abụọ n'ime ụgbọ ala na -eme ka ịkwụ ụgwọ ihe dị mfe, dị nchebe na ngwa ngwa.
12. Mkpu ụda na ọkụ mgbe oke okpomọkụ ma ọ bụ nrụgide na -ahụ na ejiri ya dị mma.
13. Ihe mmemme a ga -ekpe ikpe na -akpaghị aka wee tụọ mgbọ mgbe ike bidoro ma ọ kwụsịchaa.
14. Iguzogide nleba anya na akpaaka iji gbochie ihi mmiri.
Nke gara aga: Ngwaọrụ ịcha Carbide
Osote: Ndụmọdụ Carbide